This year has seen many communities and organizations facingamultitude of challenges. At Studer Trust, we’ve dealt with this ourselves, working with many of our teachers and schools to overcome obstacles in creative and innovative ways. A recent example of this was with the building of three new mud brick school buildings at Wan Ngaen Monastic School.
Established in 2015, Wan Ngaen Monastic School is located in eastern Shan State, aboutatwo hours’ drive from China and4hours from Thailand and Lao. It serves an average of 114 students per year, coming from 15 different villages, some walking up to an hour. There are currently nine teachers, and it is run by U Aggasena Lengtai, the principal and abbot. In 2019, Studer Trust had partnered with the school to buildabamboo schoolhouse as well asaplayground.
This year Studer Trust once again supported Wan Ngaen Monastic School with an even more ambitious project—to build three new mud-based school buildings andaplayground. While it may sound simple enough, the construction was inhibited by limited materials, transport and labour during monsoon season. Luckily, the U Aggasena Lengtai and the surrounding communities were passionate about the project, and motivated to contribute when the partnership with Studer Trust was approved.
Unlike other projects, where Studer Trust directly manages construction with Studer Trust staff and an assigned crew, this partnership involved much more cooperation and management of the school and its resources. We were only able to take this approach as we had the utmost trust in U Aggasena Lengtai to successfully execute the construction to our standards.
At the kickoff of the project, U Aggasena Lengtai wasted no time coordinating community efforts to take the first step of clearing the land in preparation for construction. Parents and young people from the surrounding villages, as well as monks from the monastery, donated their time and energy to level the ground, clean the bushes, and cut down trees. The preparations took five days withatotal of 25-30 volunteers each day.
Then it was time for the building construction. As mentioned, experienced labour to build the clay bricks was not easily available during the rainy season. Additionally, these clay blocks require production inadry area as they can easily be destroyed by the rain before they fully set. Once again quick on his feet, U Aggasena Lengtai came up withasolution. He enlisted the help of the same volunteers and trained them to help construct the blocks themselves. To keep them dry, he also had temporary shelters created.
Ultimately the buildings and the playground—complete with slides, jungle gyms, and swings—were completed. The students and community are extremely grateful for the donation of the new facilities and already excited to share how the construction of the project has hadapositive impact. One teacher noted that “The students also feel safe and healthy to play in the Studer Trust’s playground and they are happy to play in this new space.” As for U Aggasena Lengtai, he is proud of and grateful for the partnership with Studer Trust, and states that “By receiving these new school buildings from Studer Trust, we haveamuch safe and better class condition for all students.”
ယခုနှစ်ကာလတွင် များစွာသော လူထုအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အခက်အခဲပေါင်း အမြောက်အမြားကို ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ Studer Trust အနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းများနှင့် ဆရာဆရာမများ အခက်အခဲအဟန့်အတားများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် နည်းလမ်းများအား ဆန်းသစ်တီထွင်ဖန်တီးကာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါသည်။ များမကြာမီ အချိန်တွင်းက ဥပမာအနေဖြင့် ဝမ်ညင်း ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်း၏ ရွှံ့အိမ်ကျောင်းအဆောက်အအုံ အသစ်(၃)လုံးပဲဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ဝမ်ညင်း ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်လာအိုနိုင်ငံမှ ကားမောင်းလျှင် (၄)နာရီကြာမြင့်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆိုလျှင် (၂)နာရီသာကြာမြင့်သည့် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ နာရီပိုင်းမျှလမ်းလျှောက်မှ ကျောင်းကို ရောက်သည့်နေရာများ၊ မတူညီသော ရွာ(၁၅)ရွာမှ လာရောက် တက်ရောက်သည့် ကျောင်းသား ပျမ်းမျှစုစုပေါင်း နှစ်စဉ် (၁၁၄)ယောက်ရှိပါသည်။ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနှင့် ကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုတာဝန်ခံလည်းဖြစ်သည့် ဦးအဂ္ဂသေန လန်တိုင်းမှ ဦးစီးပြီး စုစုပေါင်းဆရာ (၉)ဦး လက်ရှိမှာ သင်ကြားနေပါသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် Studer Trust သည် ဝါးကျောင်းဆောင်တစ်လုံးနှင့် ကစားကွင်းတစ်ခုတည်ဆောက်၍ ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ဖူးပါသည်။
ယခုနှစ်တွင် Studer Trust သည် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အဖြစ် ဝမ်ညင်း ဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းအား နောက်ထပ် ရည်ရွယ်ချက် အလှမ်းကျယ်ပြောသည့် ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ရွှံ့အိမ်ကျောင်းဆောင်အသစ်(၃)လုံး တည်ဆောက်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရှင်းသည့် ကိစ္စဟုထင်ရသော်လည်း မုတ်သုံရာသီကာလအတွင်း လုပ်အား၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ပို့ဆောင်ရန်နှင့် ပစ္စည်းတန်ဆာများ အကန့်အသတ်ရှိသည့်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေစေခဲ့ပါသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ Studer Trust ဆီမှာ ထောက်ပံ့ကူညီရန် ခွင့်ပြုချက်ရသည့်အချိန်က ဘုန်းတော်ကြီး ဦးအဂ္ဂသေန လန်တိုင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နေပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ၎င်း ပရောဂျက်အပေါ်တွင် ပါဝင်ကူညီရန် ပြင်းပြသော စိတ်ဆန္ဒရှိနေခဲ့ပါသည်။
အခြားသော ပရောဂျက်များနှင့် မတူညီသည်က ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်အား စီမံရပြီး ဤပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွင် စာသင်ကျောင်း၏ အရင်းအမြစ်၊ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် များစွာသော ပူးပေါင်းမှုများ ပြုလုပ်ရပါသည်။ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး ဦးအဂ္ဂသေန လန်တိုင်း အပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယုံကြည်မှု အစွမ်းကုန်ရှိသည့်အတွက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုမျိားကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်မှုအား ကျွန်ုပ်တို့၏ စံသတ်မှတ်ရောက်အောင် အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။
ဤ ပရောဂျက် အစတွင် ဦးအဂ္ဂသေန လန်တိုင်းသည် အချိန်ဆွဲခြင်း အလျဉ်းမရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူလူထုအား မြေရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ပထမဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ် စီမံညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ အနီးအနားရှိရွာများမှ မိဘများနှင့် လူငယ်များ၊ ကျောင်းရှိရဟန်း၊ကိုရင်များအပါအဝင်လာရောက်ပြီး သစ်ပင်များခုတ်ထွင်ရှင်းလင်း၍ မြေညှိ၊ ခြုံရှင်းကြကာ အချိန်နှင့်တပြေးညီ လုပ်အားများပေးခဲ့ကြပါသည်။ ပြင်ဆင်မှုကာလမှာ (၅)ရက်သာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး တစ်ရက်လျှင် လုပ်အားပေးကူညီသူ (၂၅)ယောက်မှ အယောက်(၃၀)အထိရှိခဲ့ပါသည်။
၎င်းပြီးနောက် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ရန် အချိန်ကို ကျရောက်လာခဲ့ပါသည်။ ရှေ့တွင်ပြောခဲ့သလိုပင် မိုးရာသီအတွင်း အတွေ့အကြုံရှိသည့် လုပ်အား ဖြင့် ရွှံ့အုတ်များအား တည်ဆောက်ရန် မလွယ်ကူမှုများရှိနေခဲ့ပါသည်။ ထပ်လောင်းပြောရမည်ဆိုလျှင် အပြီးမသတ်ခင် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ဖျက်ဆီးမခံရစေရန်အတွက် ရွှံ့အုတ်များအား ခြောက်သွေ့သည့်နေရာတွင် ထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံပြီးတော့ ဦးအဂ္ဂသေန လန်တိုင်း အနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြင့် ရှေ့ထွက်လာခဲ့ပြန်ပါသည်။ ဘုန်တော်ကြီးသည် ၎င်း တူညီသည့် လုပ်အားပေးကူညီသူများအား စာရင်းပြုလုပ်ပြီး အုတ်များအားကိုယ်တိုင် အကူအညီပြု ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် သင်တန်းပို့ချခဲ့ပါသည်။ အုတ်များ ခြောက်သွေ့ရန် ယာယီအရိပ်ရဖို့ တဲများကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့ပါသေးသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ကျောင်းအဆောက်အအုံများနှင့်တကွ ဒန်း၊ ကစားအိမ်နှင့် လျှောများပါဝင်သည့် ကစားကွင်းအား တည်ဆောက်ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။ကျောင်းသားများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အဆောက်အအုံအသစ်များ လှူဒါန်းမှုအတွက် အတိုင်းအသိဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတည်ဆောက်မှုက မည်မျှအထိ ကောင်းစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို မျှဝေဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာတစ်ယောက်ဆိုလျှင် “ကျောင်းသားများအနေဖြင့် Studer Trust ၏ ကစားကွင်းတွင် ဆော့ကစားရသည်မှာ ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုက်ညီပြီး လုံခြုံမှုရှိကြောင်းနှင့် ဤနေရာအသစ်တွင် ဆော့ကစားရန် ပျော်ရွှင်နေကြတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဦးအဂ္ဂသေန လန်တိုင်း အနေဖြင့် Studer Trust နှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရသည့်အတွက် အထူး ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပြီး “ Studer Trust ထံမှာ ဤ ကျောင်းဆောင်အသစ်များကို လက်ခံရရှိခြင်းဖြင့် ဘုန်တော်ကြီးတို့ အနေနှင့် ကျောင်းသားများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး လုံခြုံသည့် စာသင်ခန်းနေရာရှိခဲ့ပါသည်” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။